13 askari oo lagu maxkamadeynayo Suudanta koonfureed - BBC News Somali
13 askari oo lagu maxkamadeynayo Suudanta koonfureed
Dalka Suudaanta Koonfureed 13 askari ayaa lagu wadaa in maanta la soo taago maxkamad milatari.
Askartani ayaa lagu eedeeyay in ay ka qayb qaateen weerar bishii Luuliyo ee sanadkii la soo dhaafay lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada caasimadda ah ee Juba, halkaasi oo shaqaale ka shaqeeya arrimaha samafalka lagu kufsaday isla markaana lagu dilay weriye u dhashay dalkaasi
Haddii eedeymaha loo soo jeediyay lagu helo, askartani ayaa waxa ay muteysanayaan min 14 sano oo xarig ah oo ay ku muteysanayaan kufsiga shaqaalahaasi iyo min toban sano oo ay ku muteysanayaan dilka weriyaha.
Dacwaddan ayaa tijaabo weyn u noqon doonto hannaanka caddaaladda ee dalkaasi Suudaanta Koonfureed.
Sida lagu xusay warbixinno ay soo saareen Qaramada Midoobey iyo kooxaha xaquuqul insaanka, dhacdooyinka kufsiga, tacaddiyada dhanka galmada iyo dilalka ay geysanayaan ragga ku lebisan dareyska ciidamada ayaa caadi ka ah dalkaasi Suudaanta Koonfureed.
Waxay sidoo kale walaac ka muujiyeen isla xisaabtan la'aanta ka jirta dalkaasi, taa oo ay sheegeen in ay uga sii dareyso rabshadaha ka jira dalkaasi ay colaadda la degtay.
Dadka ay arrintani waxyeelada ka soo gaartay ayaa inta badan ah dadka u dhashay dalkaasi ee rayidka ah balse weerarkaasi lagu qaaday hoteelka Terrain ee magaalada Juba ayaa lagu bartilmaameedsaday dad ajaaniib ah.
Weerarkaasi ayaa ahaa mid ka mid ah weerarada ugu ba'an ee lala eegtay shaqaalaha samafalka tan iyo markii ay billaabatay colaadda dalkaasi muddo haatan laga joogo in kabadan saddex sano.
Dagaalada dhex maraya ciidamada milatariga ee dalkaasi iyo kooxaha fallaagada ayaa wali dalkaasi ka soconaya, waxaana dalka ka qaxaya kummanaan qof oo rayid ah kuwaasi oo ka cararaya madaafiicda ay dhinacyada iska soo horjeeda isu adeegsanayaan ama xitaa in iyaga si bareer ah loo bartilmaameedsado.